Listings in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ in ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Listings in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ in ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်
Pyigyi Tagon Township History and Boundaries
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္္ တည္႐ွိၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း (၁၆) ရပ္ကြက္ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တို႔ တြင္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တို႔ႏွင့္ နယ္နိမ ...
Pyigyi Tagon Demographic & Economic Activities
Total Population 237,698*
Sex Ratio 103 males per 100 females
Area (km2) 25.6**
Population Density (persons per km2) 9274.7 persons
Mean Household Size 5.0 persons ***
Pyigyi Tagon Business Sectors
Pyigyi Tagon Employees Sectors
in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ, ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး, ရေပိုက်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ
Aung United Industry Co.,Ltd.
in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ, ရေပိုက်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ
Dagon Fine Metal Co.,Ltd. [DFM]
in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ, တံခါးအမျိုးမျိုး
in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ, အင်ဂျင်ဝိုင်နှင့်အခြားစက်ဆီ, ပါကေး
02-5152348, 09-777799095, 09-777799096
in အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်များ, ကွန်ကရစ် (အသင့်ဖျော်ပြီး), ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ, ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
09-442082873, 09-787000781, 09-256001545, 09-402767119, 09-442082873